10 minamato Pfungwa pamberi peChidzidzo cheBhaibheri | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero 10 minamato Pfungwa pamberi peChidzidzo cheBhaibheri
10 minamato Pfungwa pamberi peChidzidzo cheBhaibheri
Pisarema 119: 18: Vhurai maziso angu, kuti ndione zvinhu zvinoshamisa zviri pamurau wenyu.
Iwe unogona kunge uchinetseka nezve kuti chii chakakosha kutaura munamato pamberi pekudzidza bhaibheri.
ZVINOKOSHA KUTI NDINONYENGETA PAMBORA KUDZIDZA?
Zvakanaka, zvakakosha kuziva kuti rugwaro haruna kunyorwa kunze kwekuziva kwemunhuwo zvake. Izvo zvakanyorwa nevarume vaive vakafemerwa kwazvo mweya webugger waMwari, nekudaro, mune zvinhu mubhaibheri izvo nyama neropa hazvigone kuburitsa icho chinoreva kunze kwemweya waMwari.
Kune zviuru zvevanhu vanodzidza Bhaibheri zvichibva paruzivo rwavo rwekufa uye mhedzisiro yacho iuto revanopokana, vanhu vakadudzira zvisiri izvo mazwi aMwari. Kududzirwa zvisirizvo kwerugwaro kuchaitika kana rugwaro rwuri kududzirwa nekushandisa ruzivo rwekufa.
Ive neshuwa kuti uzive kuti Dhiabhori chaizvo anoda kutiodza isu ne izwi raMwari. Ndosaka zvisingashamisi kuti dhiabhori paaizama Jesu, dhiabhori akatora mavhesi kubva murugwaro kuyedza Jesu. Akaudza Kristu kuti asvetuke kubva paCliff nekuti Bhaibheri rakanga raraira kuti vatumwa vaIshe vatakure Kristu mumaoko avo kuti arege kupaza mukova wake pamusoro pebwe. Ruponeso rwedu runogona kunge rwuri chioniso dai Kristu anga asina kunzwisisa kwegwaro.
Hakuna chimwe chinhu chinopa nzwisiso kumurume pamusoro peshoko raMwari kunze kwemweya waMwari. Uchashamisika kuti kune vamwe Vakristu vazhinji vari kuita zvisirizvo nekuti vanofunga zvisiri izvo izvo zvakarairwa nerugwaro. Kufanana nevarume vanoparidza kuti doro rakanaka chete nekuti vakaona chikamu chebhaibheri chinoti Kristu anoshandura mvura kuita waini, saka, vanoenda kunoparidzira vanhu kuti Mwari haapesani nekunwa doro.
Kuti murume ararame hupenyu hutsvene, zvese zvinosimbirwa zvakanyorwa mugwaro, asi murume achafumura sei zvakavanzika kuseri kwemirairo iyoyo pasina kuziva kweshoko raMwari. Uye munhu achanzwisisa sei shoko raMwari pasina kuuya kwemweya wezvokwadi uyo uri mweya waMwari? Pasina mweya waMwari, Bhaibheri hachisi chinhu kunze kwebhuku renhau. Saka zvakakosha kuti isu tinogara tichinamata tisati tadzidza Bhaibheri.
Kana iwe uchinge uchizvikudza nekuziva ruzivo rwegwaro nokungoverenga Bhaibheri uye kuripa iro dudziro yako, ndinobheja hausati watanga kudzidza rugwaro. Inotevera nguva iwe yaunoda kudzidza rugwaro, iyi ndiyo minamato inotevera yekutaura:
• Ishe Mwari, tinokukwidziridzai imwe nyowani yamakatipa kwatiri kuti mudzidze patsoka dzenyu zvakare, Ishe zita renyu ngarisimudzwe muzita raJesu.
• Ishe Jesu, patiri kuenda mukufunda kweshoko renyu, tinokumbira kuvapo kweMweya wenyu Mutsvene, tinokumbira kuti mweya wenyu mutsvene utizivise zvakavanzika kwatiri muzita raJesu.
• Baba Ishe, hamusi munyori wevhiringidzi, tinokumbira kuti murege kutishungurudza nedambudziko panguva yekudzidza mazwi enyu muzita raJesu.
• Baba vari kuDenga, isu tinoramba kudzidza rugwaro setinonyorwa rugwaro, tinokumbira kuti mweya wenyu mutsvene utipe kunzwisisa kuri nani kwemazwi enyu muzita raJesu.
• Ishe Jesu, iko kukosha kwekuungana kwedu nhasi nhasi kuti tidzidze, tinokumbira kuti nesimba renyu muve nerubatsiro rwekunzwisisa kwechokwadi chenyu muzita raJesu.
• Ishe Jesu, tinoisa moyo yedu nepfungwa pamberi penyu, tinokumbira kuti mutizadze nemweya wako mutsvene nesimba muzita raJesu. Tikonzeresa kuti tisanyonganiswe nemazwi ako muzita raJesu.
• Ishe Mwari, isu tinoramba kukurudzira dzidziso dzenhema, tinokumbira kuti mutipe zivo yechokwadi uye nzwisiso yeshoko renyu muzita raJesu.
• Baba Vekudenga, tinouya kuzopesana nesimba rese renyama iro rinogona kuda kupa zvisizvo zvisizvo kumazwi ako, tinouya kuzopesana naro muzita raJesu.
• Ishe Jesu, tinokuraira kuti nesimba rako, iwe unopa rusununguko kune vakatapwa kuburikidza nekufunda kwemazwi ako muzita raJesu.
• Tinonamata kuti nengoni dzenyu, mudzikunure mweya yakarasika kuburikidza neshoko renyu muzita raJesu.
• Ishe Jesu, nesimba rechidzidzo ichi, tinonamata kuti muporese vanorwara, rugwaro rwunoti, makatumira mazwi enyu uye anoporesa zvirwere zvavo, Ishe ngavapiwe kurapwa asi mazwi ako muzita raJesu.
• Ishe Jesu, isu tinonamata kuti nengoni dzenyu, mutizivise chokwadi kuburikidza nemazwi enyu, chokwadi icho chinosunungura kubva mumakeke echivi, tinokumbira kuti mutiurire muzita raJesu.
• Ishe Jesu, tinokumbira kuti muve nokuzarurirwa kwakadzama. Mupostori Pauro anoti ndinogona kumuziva iye nesimba rekumuka kwake. Ishe Jesu, tibatsireiwo kuziva zvakawanda nezvako muzita raJesu.
• Ishe Jesu, izwi renyu rinopa nyaradzo kune vakaputsika moyo, isu tinokumbira kuti nekudzidza kweshoko renyu kuti muporese kurwadziwa kwese nekukuvara kwemoyo muzita raJesu.
• Tinovimba chete neuchenjeri hwako, isu tinovimba chete nekunzwisisa kwako, isu tinovimba chete neruzivo rwako, tinokumbira kuti utidzidzise wega muzita raJesu.
• Tinonamata kuti mutibatsire kuti tisangodzidza izwi renyu tega, asi mutipewo nyasha dzekutevera kuti titungamire chikamu chedu kuchenjera muzita raJesu.
• Ishe pakupedzisira, musarega izwi iri richitarisana nesu pachigaro chekutonga, pachinzvimbo, ngatiponeswe naro muzita raJesu.
Previous nyayaMinyengetero inopesana nekushushikana uye kunetseka
inoteveraMinamato Yehuchenjeri uye Kunzwisisa
Kuzvipira Kwemangwanani: Kunokosha
Mupfupi Munamato wekuporesa uye Kupora
Zvikonzero 20 Nei Minyengetero Isingapindurwe
Munamato Kumiririra Kuramba Kufa